१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले ‘हाउसमेड’ सम्बन्धी नयाँ नीति नबनेसम्म नेपाली महिला कामदारलाई प्रवेशाज्ञा नदिन विदेशस्थित नियोगमार्फत सम्बन्धित मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । महिला कामदारलाई हाउसमेडका रुपमा पठाउने नेपालमा अहिलेसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । नेपालले कुनै पनि देशसँग त्यससम्बन्धी श्रम सम्झौता समेत नगरेकाले महिलाको सुरक्षा र हक हितकै लागि यस्तो निर्णय गरिएको अधिकारीहरुले...
नयाँ संविधान कठोर बनाउने कि खुकुलो ? १६ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले अब बन्ने संविधानमा धेरै अपरिवर्तनीय प्रावधान राख्न नहुने बताएका छन्...
सिंहदरबारमा जनजाति नेतासँग गृहमन्त्रीको भनाभन १६ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र जनजाति नेताबीच जुहारी चलेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा...
राजदूत बनेर विदेश गएकालाई फर्काउनै गाह्रो १६ भदौ, काठमाडौं । गत ०७० साल चैतमै कार्यकाल सकिए पनि दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अरुणप्रकाश धिताल नेपाल फर्कन मानेनन् । साउनसम्म काठमाडौं...
सुष्माको पहिरन, देख्नेलाई हैरान(फोटो फिचरसहित)
१६ भदौ, नयाँ दिल्ली । भारतमा सार्वजनिक यातायात एवं सीमानामा हुने नेपालीमाथिको लुटपाटविरुद्ध उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भारतमा रहेका नेपालीले...
१६ भदौ, काठमाडौं । अन्चल प्रहरी कार्यालय वीरगंजको सशस्त्र गुल्मले सोमवार बिहान ३ बजे करिब १५ लाख बराबरको कपडा बरामद गरेेको छ । भारतबाट...
१६ भदौ, संखुवासभा । संखुवासभाको मुढे शनिश्चरे वजारका ५८ वर्षका रत्नमान भनिने इन्द्र वहादुर जिमी मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । १० दिनदेखि बेपत्ता...
१६ भदौ, संखुवासभा । जिल्ला वन कार्यालय संखुवासभाका वनरक्षक छिरिङरिदर भोटे कस्तुरीको बीनासहित पक्राउ परेका छन् । दुर्लभ बन्यजन्तु कस्तुरीको बीनासहित उनको साथबाट ४...
भाइलाई सभासद बनाएपछि कमल थापाको बयान
सुराकी लगाएर वीरेन्द्रको सम्पत्ति खोज्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
सेना र प्रहरीमा भर्ती हुने महिलाले ‘चिन अप’ गर्नु नपर्ने
पूर्वराजासहितको गोलमेच सभा गर्न माग
१६ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई कडि्कएपछि सोमबारको बैठकले नयाँ संविधानमा रहने केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति...
१६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफूलाई अब क्यान्सरले पनि केही गर्न नसक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान प्राकृतिक प्रकोप...
‘झोला’ चलचित्र बनाउँदा भोग्नुपरेका झमेला
१६ भदौ, पोखरा । प्रेमीकालाई आकाशमा उडाउने सपना कस्लाई पो हुँदैन र ! धेरैले तारा झार्ने सपना पनि बाँड्छन् । तर, साँच्चिकै मनको मान्छेसँगै आकाशबाट धर्तीमा झर्नुको मज्जा बेग्लै
१६ भदौ, काठमाडौं । माइक्रोम्याक्सले इन्ट्री लेवलको नयाँ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा भित्राएको छ । कम्पनीले माइक्रोम्याक्स बोल्ट ए०६४ मोडल नेपाल भित्राएको हो । जसको मूल्य ६ हजार १ सय
सार्क बैठकमा आप्रवासन सम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गरिने
उच्च व्यवस्थापनबाटै बीमा समितिमा वित्तीय क्षति : छानविन प्रतिवेदन
१६ भदौ काठमाडौं । बीमा समितिमा भएको अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिले उच्च व्यवस्थापनका कारण संस्थाले वित्तीय क्षति व्यहोरेको निष्कर्श निकालेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव नवराज भण्डारीको संयोजकत्वमा...